Lauren RAJAOBELINA · Avrily 2018 · Global Voices teny Malagasy
Lauren RAJAOBELINA · Avrily, 2018
Lahatsoratra farany an'i Lauren RAJAOBELINA tamin'ny Avrily, 2018
Pakistàna: Ny Lova Navelan'i Benazir Bhutto
Azia Atsimo 26 Avrily 2018
Lefy ihany ny vaovao momba ny fahafatesan'i Bhutto. Mifantoka amin'izay mety ho lova navelany ny mpitoraka bilaogy. Tahaka ny politika mampiavaka an'i Azia Atsimo matetika, ny ankamaroan'ny fifanolanana dia mirona amin'ny fianakaviana sy ny Antoko Politikan'ny vahoaka.
Rising Voices Any Sierra Leone Sy Bangladesh
Afrika Mainty 26 Avrily 2018
Tamin'ity herinandro ity, dia nasongadinay ny fivoaran'ny roa amin'ireo tohanan'ny Rising Voices any Azia sy Afrika. Mpianatra asa ao amin'ny Think Build Change Salone any Siera Leone no manomboka manoratra ireo traikefany raha toa ka mifantoka amin'ny fanampiana lahatsary sy sary ao amin'ny kitapon'ny fahaizamanaony kosa ireo vehivavy ao amin'ny Nari Jibon.
Malezia: Taratasy Fitarainana Hanoherana Ny Filohan'ny Vaomiera Misahana Ny Fifidianana
Azia Atsinanana 18 Avrily 2018
Toherin'ny vondron'ny mpanohitra ny fanitarana ny taona fandehanana misotro ronono ho an'ny Filoha amperinasan'ny Vaomiera Misahana ny fifidianana satria tsapan-dry zareo ny fiangarany. Tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity, niezaka ny manampahefana maleziana nanakana ny fanaterana ilay taratasy fitarainana manohitra ny fanalavàn-taona avy amin'ny mpikatroka mafana fo mpanohitra ho ao amin'ny parlemanta. Mizara lahatsary vitsivitsy sy miady hevitra momba ilay taratasy fitarainana ary ireo fepetra noraisin'ny manampahefana hanoherana ireo mpikatroka mafana fo ny mpitoraka bilaogy sy ny mpisera amin'ny YouTube Maleziana.
Azia Afovoany sy Kaokazy 18 Avrily 2018
"Tsy maintsy mitady asa any amin'ireo firenena hafa ny olona satria tsy mamorona asa ho azy ireo isika."
Azia Atsimo 16 Avrily 2018
Bahrain: Kamo Ve Ny Arabon'ny Golfa?
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 16 Avrily 2018
Tamin'ny fiandohan'ny herinandro farany ho an'ny Janoary 2008, nitafatafa tamin'ny gazetin'ny firaisambe arabo mpiseho isanandro "Asharq Al-Awsat" ny minisitry ny asa Bahraini, Majid Al Alawi, ary nolazainy tao amin'ilay resadresaka fa miatrika 'tsunami aziatika' ny Golfa satria 'kamo' sy 'simba' ary miankina amin'nireo mpiasa afarana avy any ivelany ireo teratany ao Golfa amin'ny fanaovana na dia ny asa tsotra aza. Nambarany fa ireo mpiasa vahiny manodidina ny 17 tapitrisa ao Golfa, aziatika ny ankamaroany, dia ho 'loza ratsy kokoa noho ny baomba atomika na ny fanafihan'ny israeliana'. ahoana ny eritreritr'ireo mpitoraka bilaogy bahraini ?
Azia Atsinanana 15 Avrily 2018
Fanentanana amin'ny aterineto no natao ho fanampiana ireo niharam-boina tavela tamin'ny raharaha andevo shinoa 2007 ---ireo fianakavian'ireo mpiasa tamin'ny lafaoro. Mizara ny alahelony ny zanany izy ireo, lasa holatra mandritra ny androm-piainana ny fahatsiarovana ireo zavatra nampahory. Mbola misy tsy hita ireo ankizy sasany nefa ny governemanta tsy miraharaha intsony io resaka io, ary navelany hiady irery ireo fianakaviana. Manentana amin'ny fanomezana tolo-tànana mba hanohanana azy ireo amin'ny fanaovana ny taombaovao Shinoa amin-kafanàna ny aterineto.
Azia Afovoany sy Kaokazy 04 Avrily 2018